သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့တံဆိပ်အကပ်မခံနိုင်လို့ ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Shwe Nay Chi
အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားအပြီး အနုပညာရှင်တွေများစွာဟာ ပြ ည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ တက်တ က်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရပြီး ရှောင်တိမ်းနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိသလို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။
၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအ ခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Speak outမလုပ်တော့ဘဲ ခံဝန်ကတိထိုးရင် ဖွင့်ထားတဲ့အမှုကို ပြန်လည်ရုတ်သိ မ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ပျံ့နှံ့လာနေခဲ့ပါတယ်။
ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သရုပ် ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာကြောင့် ဘေးလွတ်ရာမှာရှောင်တိမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုဟာ ခံဝန်ကတိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်အကပ်မခံနိုင်ဘဲ အသ က်ပေးသွားသူတွေ၊ထောင်ကျသွားသူတွေကြောင့် ခံဝန်ကတိထို းမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိ အ မှန်တရားဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေပြီး ခံယူချ က်၊ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပြည်သူတွေက ချီးကျူးလေးစားနေကြပါတယ်။
သူမကတော့ ” ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးခဲ့မိလို့မှားသွားပါတယ်. ..လို့ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေရမယ်တဲ့လား ….မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်တဲ့လား…. အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရမယ်တဲ့လား….တစ်ချို့တွေအသက်တွေပေးသွားကြပြီ… တစ်ချို့တွေ ထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြပြီ….
တစ်ချို့တွေအားလုံးကိုပစ်ချထားခဲ့ပြီးလက်နက်တွေကိုင်နေကြရပြီ….သူတို့တွေအိမ်ပြန်လို့မရကြတော့ဘူး…မိသားစုနဲ့လည်းကွဲကွာကုန်ကြပြီ သူတို့ချစ်တဲ့အလုပ်‌တွေလည်းလုပ်ခွင့်မရကြတော့ဘူး အဲဒီ့လူတွေကိုငါရှက်တယ်။
အဖြစ်မရှိသူဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်‌နဲ့တင်ငါ့အတွက်လုံလောက်ပါပြီ…သ စ္စာဖောက်ဆိုတဲ့တံဆိပ်တော့အကပ်မခံပါရစေနဲ့ အရေးတော် ပုံမအောင်မချင်းငါအိမ်မပြန်ဘူး “ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သေနတ်ပစ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ အနုပညာရှင်သုံးဦး ဘယ်သူတွေများပါလိမ့်(ရုပ်သံ)